LILIPHI IJELO LETV ELIKWIMAN CITY V MAN UTD? KHABELA IXESHA KUNYE NOKUSASAZA NGQO-IRADIO TIMES - IBHOLA EKHATYWAYO
Leliphi ijelo umdlalo weMan City v Man Utd wePremier League? Khaba ixesha, usasaze ngqo kunye neendaba zeqela zamva nje
IManchester United inethemba lokuthatha umoya kwiiseyile zaseManchester City, ngokudanisa abo bachasene nabo e-Etihad ngeCawa.
Kwakungekho kudala kakhulu ukuba i-United kunye neSixeko babeyintamo-kunye-intambo yobuntshatsheli, kodwa imikhosi yangeCawa ikhawulezile ngokubaleka okumangalisayo, iphumelele imidlalo ye-15 yePremier League kwi-bounce ukuya kumanqaku e-14 ngokucacileyo phezulu.
Amadoda kaPep Guardiola ngoku ziintshatsheli kuwo onke amagama, kodwa i-United isenendawo eneendawo ezine zokuzikhusela phakathi kwangoku noMeyi, ngelixa amalungelo okuzigwagwisa endawo nawo esemgceni.
Bukela iMan City v Man Utd kwiSky Sports
Kuthetha ukuba ukungqubana kwangeCawa kuya kuba kuhle ngakumbi kunaleyo ye-0-0 yomtsalane kula macala avelileyo xa begqibile ukudibana kwiligi ngoDisemba.
Kwakukho nje izithonga ezine kwithagethi erekhodwe ngexesha lomdlalo e-Old Traord, ukusuka kumaqela amabini azuze amanqaku kwi-avareji yeenjongo ezimbini ngelixesha. Baphinde babambana kwiNdebe yeLigi ngoJanuwari, apho iSixeko sajika umdlalo we-turgid ngokulinganayo 2-0 e-Old Trafford.
RadioTimes.com ujikeleze yonke into oyifunayo malunga nendlela onokubukela ngayo iMan City v Man Utd kumabonwakude nakwi-intanethi.
Inini iMan City v Man Utd kwiTV?
IMan City v Man Utd iya kuqhubeka NgeCawa nge-7 kaMatshi 2021 .
Jonga eyethuImidlalo yeNkulumbusokwayephila ibhola ekhatywayo kwiTVIsikhokelo samaxesha akutshanje kunye nolwazi.
IMan City v Man Utd iya kuqala 4:30 pm .
Kukho imidlalo emininzi yePremier League eqhubeka kwiintsuku ezizayo, kubandakanya i-Chelsea v Everton, eqala nge-6 ngokuhlwa ngoMvulo.
Leliphi ijelo leTV elikwiMan City v Man Utd?
Ungawubukela umdlalo bukhoma Imidlalo yeSky IPremier League kunye noMnyhadala ophambili ukusukela ngentsimbi yesi-4.
Unokongeza iSky Sports Premier League kunye nemidlalo yeBhola ekhatywayo yamajelo nge- $ 18 nje ngenyanga edityanisiweyo okanye uthabathe iphakheji yezemidlalo epheleleyo nge- $ 23 nje ngenyanga.
Fumana ngakumbi malunga neephakeji ezilungileyo zeSky
Uhlala njani ukusasaza iMan City v Man Utd kwi-intanethi
Abathengi beMidlalo yeSky banokusasaza umdlalo nge-app ye-Sky Go kwizixhobo ezahlukeneyo (kubandakanya uninzi lwee-smartphones kunye neetafile) njengenxalenye yobhaliso lwabo.
Ungawubukela umdlalo ngeNGOKU TVngaphandle kokutyikitya isivumelwano.
NGOKU umabonwakude unokusasazwa ngekhompyuter okanye ii -apps ezifumaneka kwii-TV ezininzi, iifowuni kunye nokududuza. NGOKU i-TV ikwafumaneka nge-BT Sport.
Iindaba zeqela leMan City v Man Utd
IsiXeko seMan: UNathan Ake uhlala ekuphela komntu ongekhoyo ku-Guardiola kwaye umkhuseli unokufumana ukuphuma apha, nangona engenakulindeleka ukuba abeke emngciphekweni.
Umphathi kufuneka athathe isigqibo malunga nendlela yokubeka umgca wakhe wangaphambili. UGabriel Jesus noRaheem Sterling banokuthi bazigcine iindawo zabo, kodwa uRiyad Mahrez unokuhla aye ebhentshini ngenxa kaPhil Foden.
UMntu Utd: UDean Henderson unokuphinda aqale kwakhona kwinjongo endaweni kaDavid De Gea, ngelixa u-Edinson Cavani efanele ukugcina indawo yakhe iphambili.
U-Ole Gunnar Solskjaer ngaphandle kukaPaul Pogba, uJuan Mata kunye noPhil Jones. Kukho ithemba u-Anthony Martial noDonny van de Beek bayokuchacha ekonzakaleni ngexesha lokudlala.
IMan City v Man Utd iingxaki
Ukubetha okungu-365: ISixeko seMan ( 8/15 Zoba ( 10/3 UMntu Utd ( 5/1 ) *
Uqikelelo lwethu: IMan City v Man Utd
IsiXeko sibalekile neligi kule sizini kwaye oko kuyinxalenye yeqela elinciphise ifuthe lokonzakala kwabadlali abaziinkwenkwezi.
I-United ayinayo loo ntuthuzelo, njengoko kuye kwabonakala, ngeziphumo zamva nje ngokuchasene neCrystal Palace kunye neSheffield United ebhengeza ukudinwa kwiqela.
USolskjaer uza kuyalela iqela lakhe ukuba ligcine izinto ziqinile ngeCawa kwaye ujonge ukubetha iSixeko kwikhefu ngokuthanda kukaMarcus Rashford noMason Greenwood. Kodwa isiXeko silawula ukuhamba ngenqanawa ngoku kwaye kufuneka sinqumle lo mdlalo.
Uqikelelo lwethu: IMan City 2-1 iMan Utd ( 2/15 e ukubheja )
ngubani oya kubhuti omkhulu wodumo
Ixesha lokugqibela le-x-factor
iiarhente zexesha lekhaka 6 uk
Ixesha le-marcella 2 umhla wokukhutshwa kwe-Netflix
uthotho lweTV kumdlalo we2019
Umphathi wamajoni ebusika isuti
izakuqala nini i-jack ryan isizini 2